February 17, 2021 – ျမန္မာသတင္းစံု
Mytel မှအလုပ်ထွက်ပြီး မုန့်ဟင်းခါးရောင်းနေတဲ့ အင်ဂျီနီယာမလေး စစ်အာဏာ ထိမ်းသိမ်းခဲ့သည့် လတ်တလော ဖြစ်ရပ်များ အပေါ် မြန်မာ ပြည်သူများ အနုပညာ ရှင်များ အားလုံး ဆန္ဒပြလျက် ရှိရာ အမြို့မြို့ အနယ်နယ် တွင်လူဦးရေသိန်းချီနေပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ထိန်းသိမ်းပေးလျှက် ရှိနေပါတယ်။ “ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ဒို့အရေး”၊ “စစ်အာဏာရှင်စနစ် အလိုမရှိ” ၊ “အမေစု ကျန်းမာပါစေ” စသည့်ကြွေး ကြော်သံများကို ကြွေးကြော် ကြပါတယ်။ ထို့အတူ ပင် မြန်မာပြည်တွင်း ရှိ မြို့နယ် အလိုက် လူဦးရေ သောင်းချီသိန်းချီ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြလျှက် ရှိရာ ယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲသည် ထူးခြားချက်များ နှင့် ပြည့်နှက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ ပြည်သူများ နှင့် […]
Posted on February 17, 2021 Author admin	Comments Off on MYTEL မှအလုပ်ထွက်ပြီး မုန့်ဟင်းခါးရောင်းနေတဲ့ အင်ဂျီနီယာမလေး
ဖမ်းဆီးခံ တပည့် ကျောင်းသားတွေအတွက် “ကျွန်တော့အသက်နှင့်ရင်းပြီးအာမခံတယ်” လို့ပြောပြီး အချုပ်ကားခေါင်းခန်းပေါ်ထိ တက်လိုက်သွားတဲ့ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ချုပ်ဆရာကြီ……….
မြတ်ဆရာ “ကျွန်တော့အသက်နှင့်ရင်းပြီးအာမခံတယ်” လို့ပြောပြီး အချုပ်ကားခေါင်းခန်းပေါ်တက်လိုက်သွားကာ ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားတွေကိုအာမခံထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအောင်မြတ်ကျော်စိန်ရဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်ကြိုးစားပေးတဲ့မှတ်တမ်းပုံရိပ်ပါ။ အာစရိယဂိုဏ်းဝင်စစ်စစ်ဆရာသခင်ကို🙏🙏🙏🙏🙏 အထူးလေးစားဦးညွှတ်ရင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာကြီး။ crd အညတရ(ရာမညမြေ) မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ဓါတုဗေဒ ကျောင်းသားဟောင်း ၁၉၈၈ အချိန်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခဆရာကြီးဒေါက်တာဉီးခင်မောင်တင့် (တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်)ကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ “ကျွန်တော့အသက်နှင့်ရင်းပြီးအာမခံတယ်” လို့ပြောပြီး အချုပ်ကားခေါင်းခန်းပေါ်ထိ တက်လိုက်သွားတဲ့ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ချုပ်ဆရာကြီး ဒေါက်တာအောင်မြတ်ကျော်စိန် ကို အရမ်းလေးစားပါတယ် ဆရာ။ ဆရာကြီးကိုယ်တိုင် ညှိနိူင်းပေးလို့ ဖမ်းဆီးထားသောာ ကျောင်းသား ၁၁ဦးကို ညနေ 5:26PM တွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာက အပြင်မှာလဲတကယ် အရမ်းသဘောကောင်းပြီး သူဘာသူအေးဆေးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ဆရာပုံတွေနဲ့ မိသားစု ပုံတွေ ယူသုံးပြီး ပြည်သူတွေ အထင်မှားစေမဲ့ ပိုစ့်ကို တင်ထားသူများ […]
Posted on February 17, 2021 Author admin	Comments Off on ဖမ်းဆီးခံ တပည့် ကျောင်းသားတွေအတွက် “ကျွန်တော့အသက်နှင့်ရင်းပြီးအာမခံတယ်” လို့ပြောပြီး အချုပ်ကားခေါင်းခန်းပေါ်ထိ တက်လိုက်သွားတဲ့ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ချုပ်ဆရာကြီ……….
Posted on February 17, 2021 Author admin	Comments Off on CDMမှာပါဝင်ခဲ့လို့တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းသည့်အ